Sirdoonka Kenya Oo Shaaciyay Tirada Al Shabaab-Kii Ugu Badnaa Oo Gudaha U Galay Kenya
Nairobi (GeboGeboNews)-Warbaahinta dowladda Kenya ayaa shaacisay in xubno ka tirsan Al Shabaab ay gudaha u galeen deegaano ka tirsan dalka Kenya, waxaana sii korortay cabsiga laga qabay weeraro ay ka geystaan gobolka waqooyi Bari dalka Kenya.
Ku dhawaad 40 Dagaalame oo ka tirsan Al Shabaab ayaa la sheegay inay gudaha u galeen dalka Kenya, waxaana warbaahinta Kenya ay shaacisay inay ka gudbeen dhanka xuduuda Soomaaliya todobaadkii lasoo dhaafay.
Warbaahinta Kenya ayaa shaacisay in hay’adaha Sirdoonka Kenya ay ka heleen macluumaadka ku saabsan in xubnaha Al Shabaab ay gudaha u galeen dalka Kenya.
Kooxda ayaa la rumeysanyahay in ay ku dhuumanayaan magaaladda Lafey ee ismaamulka Mandheera, waxaana laga cabsi qabaa in ay qaadaan weerarro aargoosi ah oo daba socda Sarkaal todobaadkii hore looga dilay tuulo lagu magacaabo Dawaduba.
“War aan la xaqiijin ayaa sheegaya in kooxdu ay doonayaan in hub looga furtay Dawaduba dib loogu soo celiyo 24 saac gudahood, haddii kale ay caradooda kala dul dhici doonaan Bulshadda deegaanka” ayaa laga aqriyay warka sirdoonka Kenya laga helay.
Sirdoonka Kenya ayaa laamaha amaanka la wadaagay macluumaadka kooxda gudaha u gashay Kenya, waxayna sidoo kale kaga digeen inay yareystaan macluumaadka lala wadaagay laamaha amaanka Kenya.
Taliyaha Booliiska Mandera Jeremiah ole Kosiom ayaa shegay in ay ka warqabaan in Al-shabaab ay deegnadda Mandheera hoosta ku dhuumanayaan wuxuuna sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ka hortagaan.
Todobaadkaan Kenya ayaa gabi ahaanba joojisay isku socodka gaadiidka dadweynaha ee magaalooyinka Mandheera iyo Nairobi ee dalka Kenya, iyada oo laga baqayo weeraro Al Shabaab ay geystaan.